Ọrụ ịkwụ ụgwọ maka mmebi nke ndị aka ha dị ọcha na Palestine - Rabbi Michael Avraham
Ọrụ ịkwụ ụgwọ maka mmebi nke ndị aka ha dị ọcha nke Palestine
Nzaghachi > Atiri: Izugbe > Ọrụ ịkwụ ụgwọ maka mmebi nke ndị aka ha dị ọcha nke Palestine
Paini Ajụrụ ya ọnwa 5 gara aga
Enwere ọrụ dị na steeti Israel ịkwụ ụgwọ ndị Palestine aka ha dị ọcha bụ ndị e merụrụ ahụ site na omume nke steeti Israel megide Hamas?
Na ajụjụ ọzọ, ọ bụrụ na ị daa Mmejọ N'ime omume nke otu ike, yana n'ihi mmejọ ahụ onye Palestine merụrụ ahụ, enwere ọrụ ịkwụ ụgwọ ya?
Na isiokwu m na nsogbu nke mgbidi nchebe (onye ọ bụla na ọha mmadụ), nkwubi okwu bụ na ọ bụrụ na ọ bụ ndị ọzọ (na-abụghị ndị Palestine) bụ ndị e merụrụ site na omume anyị, m ga-asị ee, na mgbe ahụ Hamas nwere ike ịgba akwụkwọ maka ya. mmebi ahụ. Mana n'ihe banyere ndị Palestine, ọ dị m ka ha ga-atụgharị ozugbo na Hamas, bụ ndị na-alụ ọgụ maka ha na ndị ọrụ ya ga-akwụ ha ụgwọ. Dị nnọọ ka ọ dịghị mkpa ịkwụ ndị anyị na-alụ ọgụ maka ndị agha merụrụ ahụ n'agha na-enweghị isi. Ekwuwo na mgbe agha na-ada, ibe na-agbawa.
Paini Zara ọnwa isii gara aga
M na-echeta ma ị na-dere n'ebe ahụ na ọ bụrụ na ndị na-akpagbu nwere ike ịzọpụta na-akpagbu na otu n'ime ya n'aka na ọ bụghị azọpụta mgbe ahụ ọ ga-. Gịnị mere na ọ dịghị irè ebe a nakwa banyere mmejọ?
Nke mbụ, ònye kwuru na ọ bụ ọnọdụ ọ gaara azọpụta? Enwere ndị gbara ọsọ ndụ adịghị ike bụ ndị a na-apụghị izere ezere. Nke abụọ, ọ bụrụgodị na e nwere ụzọ isi zere na nke a kpọmkwem, mmejọ na-eme ma bụrụ akụkụ nke ụzọ ụwa na agha.
Ụzọ Maimonides si mee bụ na igbu mmadụ dị otú ahụ abụghị iwu. Amachibidoro ya mana ọ bụghị onye na-egbu mmadụ. Usoro Thos bụ ee.
Hasbra na-ekwu na ọ bụrụ na m mebiri ihe onwunwe onye nwe ya na mberede na agaghị m akwụ ya ụgwọ. Na ụfọdụ ndị mbụ na ndị ikpeazụ dere na na ndị na-akpagbu onwe ya nwekwara ihe ọ bụla machibidoro igbu ọbụna mgbe ọ pụrụ ịzọpụta ya na otu n'ime ya n'ụkwụ. Nke a na-ekwu naanị maka ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ihe merenụ mere nke otu n'ime ndị ozi nke steeti Israel (onye agha / onye uwe ojii) gbapụrụ wee mee omume ọjọọ megide nwa amaala Palestine ( were ya na onye agha dinara onye Palestine). N'ọnọdụ dị otú ahụ, ọ̀ dị ibu ọrụ dị n'aka Mba Izrel ịkwụghachi otu onye e mere mpụ ahụ?
Eche m. Mgbe ahụ enwere ohere ịgba onye agha ga-eweghachi ego ahụ na steeti ahụ. Ma o mere ihe na ike na ike (ikike na ngwá agha) o nyere ya, n'ihi ya, ọ bụ ya kpatara omume ya.
Ọ bụrụ na e dinara ya n'ike n'enweghị ihe ọ bụla, ọ bụghị site n'ikike nke ogwe aka ma ọ bụ ikike ọ natara ma dị ka nwoke ọ bụla ọzọ, mgbe ahụ n'echiche m, nkwupụta ahụ bụ nke onwe ya megide ya ma ọ dịghị ọrụ ọ bụla na steeti iji kwụọ ụgwọ.
N'ihe gbasara ọrụ steeti, kedu ka o si kwekọọ n'ihe ị dere n'elu na ọ bụghị steeti na-akpata mmejọ ya, ebe ebe a ọ na-akpata ajọ omume nke ndị ozi ya (nke na-esiteghị na steeti ahụ ọ bụghị ya. a na-ewere ya dị ka obi).
N'ihi na a na-ekwu maka mmebi nke agha ahụ kpatara, na nke ahụ enweghị ibu ọrụ n'ihi na e nwere iwu mkpagbu ọnụ. Ma ọ bụ naanị omume aka ike nke na-abụghị maka agha n'ezie nwere ọrụ ịkwụ ụgwọ. Enweghị iwu mkpagbu ebe a.
A maara ikpe yiri nke ahụ na na 2000 Mustafa Dirani gbara Steeti Israel akwụkwọ maka mmebi, na-azọrọ na ndị na-agba ya ajụjụ mere ya ikpe abụọ nke mmetọ mmekọahụ. Tinyere ihe ndị ọzọ, ebubo ebubo na-ekwu na onye isi na Unit 504, nke a maara dị ka "Captain George," tinyere ihe ndị a n'ime ike nke Dirani. Dị ka Dirani si kwuo, n'oge a na-agba ya ajụjụ, a tara ya ahụhụ, gụnyere ịma jijiji, iweda ya ala, tie ihe, ịghara ihi ụra, na ikekọta ya na ikpere ruo ogologo oge, na n'ihi mmechuihu ya, a gbara ya ajụjụ mgbe ọ gba ọtọ . E gosipụtara teepu nyocha, nke Unit 504 sere, na mmemme telivishọn "Eziokwu" na Disemba 15, 2011. . N'otu n'ime vidiyo ndị ahụ, a hụrụ onye nchọpụta George ka ọ na-akpọ otu n'ime ndị nchọpụta ndị ọzọ ma nye ya ntụziaka ka ọ tụgharịa uwe ogologo ọkpa ya na Dirani ma yie Dirani egwu idina mmadụ ma ọ bụrụ na o nyeghị ozi.
Na July 2011, Ụlọikpe Kasị Elu kpebiri, n'ọtụtụ echiche, na Dirani nwere ike ịga n'ihu na-agbaso ebubo ntaramahụhụ ọ gbara megide Steeti Israel, n'agbanyeghị na ọ bi na obodo ndị iro, na ọbụna laghachi na itinye aka na mmegide mmegide megide ndị ọchịchị. steeti  N'okwu steeti ahụ, e mere ikpe ọzọ, na Jenụwarị 2015, e kpebiri na a ga-ewepụ ihe Dirani kwuru, n'ihi na mgbe a tọhapụrụ Dirani n'ụlọnga ọ laghachiri n'òtù ndị na-eyi ọha egwu nke ebumnuche ya bụ ime ihe megide steeti ahụ. na ọbụna ibibi ya.
A na-ahụ site na nke a na ọ dị mkpa maka ajụjụ ma onye ahụ gbara akwụkwọ bi na steeti ndị iro ma ọ bụ na ọ bụghị. M na-echetakwa na e nwere ụkpụrụ sitere n'oge iwu Britain nke na-ekwu na onye iro enweghị ike ịgba akwụkwọ.
Azịza m abụghị nke iwu kwadoro (Abụghị m ọkachamara na iwu mba ụwa). Ekwuru m echiche m na ọkwa omume.
Ma Dirani, nsogbu abụghị na o bi n’obodo ndị iro kama na ọ bụ onye iro na-akpachi anya. Onye ọ bụla bi na steeti ndị iro nwere ike ị nweta ụgwọ ọrụ, mana naanị ma ọ bụrụ na emere ya ihe n'ụzọ iwu na-akwadoghị ọ bụghị n'ọnọdụ agha (ya bụ na mberede na-emerụ ndị aka ha dị ọcha). Echere m na e mere ahụhụ ndị a ọ bụghị nanị iji mebie ya kama iji nweta ozi n'aka ya. Ya mere ihe ndị a bụ omume agha. Ọ bụrụ na ha ka na-emegbu ya, ọ bụrụgodị na ọ bụ na GSS dị ka akụkụ nke nyocha, mgbe ahụ ọbụna dị ka onye iro ọ nwere ike ị nweta ụgwọ ọrụ, na nke ahụ bụ mkparịta ụka ahụ mere n'ebe ahụ.
Site n'ụzọ, arụmụka na ọ bụrụ na ọ na-eme ihe iji bibie steeti ọ na-anapụ ya ikike iji ụlọ ọrụ ya na-ada m n'ụzọ iwu kwadoro. Onye agha ọ bụla (ndị a dọọrọ n'agha) nọ n'ọnọdụ dị otú ahụ, echere m na ọ dịghị onye ga-ekwu banyere onye agha. Ha kwuru nke a gbasara Dirani maka na ọ bụ onye na-eyi ọha egwu.
Ọzọkwa, e nwere arụmụka ebe a: ọ bụrụ na mmegbu ahụ gafere ihe a na-ekwe omume ma ọ bụ na-eme ya maka naanị nzube nke mmetọ, mgbe ahụ ọ bụrụgodị na Dirani enweghị ikike ịgba akwụkwọ na steeti ahụ kwesịrị nyochaa ma taa ndị mere ya ahụhụ (mpụ ntaramahụhụ, n'agbanyeghị akwụkwọ ikpe obodo Dirani). Ma ọ bụrụ na ha ewepụghị - mgbe ahụ gịnị ka ọ dị mkpa na ọ bụ onye iro. Enweghị ihe kpatara ime ihe.
Jụọ ndị na-eyi ọha egwu ụgwọ ụgwọ Zara ọnwa isii gara aga
B.S.D. XNUMX wɔ P.B
Ọ dị ka òtù ndị na-eyi ọha egwu bụ ndị ọrụ igbu ọchụ nke IDF kwesịrị ime ihe nchebe na mgbochi bụ ndị na-akwụ ụgwọ maka mmebi ndị e mebiri n'oge agha ndị nkịtị na-emeghị ihe ọjọọ, ndị Juu na ndị Arab.
Daalụ, Hasdai Bezalel Kirshan-Kwas Cherries